एन आर एन कोरियामा वुद्धी गुरुंग ,यज्ञराज सुवेदी र विपिन गुरुंग को त्रिपक्षिय भिडन्त, | Pardehshilife
एन आर एन कोरियामा वुद्धी गुरुंग ,यज्ञराज सुवेदी र विपिन गुरुंग को त्रिपक्षिय भिडन्त,
admin ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०३:११ 20th September 2019
एन आर एन कोरियाको अध्यक्षमा ३ जना भिडने भएका छन । एन आर एनको संस्थापनकाल देखि सक्रिय रहेका यज्ञराज सुवेदी , वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन गुरुंग र गत वर्ष समेत उम्मेदवारी दिएका वुद्धि गुरुंगको उम्मेदवारी परेको छ ।
जन्म ताप्लेजुङ र झापाको बसाईको कारण उनलाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रका कोरियाका नेपालीको विशेष साथ सहित कोरियाका नेपालीले सहयोग गर्ने अनुमान छ । सुवेदी विगत २५ वर्षदेखि कोरियामा श्रमिकको पक्षमा काम गर्दै आईरहेका छन भने माईग्रेन्ट हाउस किम्हेको अध्यक्ष पनि हुन । यसैगरी उनी प्रवासीको तर्फबाट कोरियन राष्ट्रपतिको मानार्थ सल्लाहकार छन । उनको कोरियाको दक्षिणी क्षेत्र सहित सोलबाहिरको एरियामा विशेष पकड छ भने उनलाई स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको समेत समर्थनमा उनी जीतको लागि दावेदार छन ।
यसैगरी वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन गुरुंग पनि अहिलेको बलियो प्रतिस्पर्धि हुन । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेकोले समेत उनले अध्यक्षको लागि आफ्नो दावी रहेको बताउछन । बरिष्ठ सल्लाहकारको रुपमा विभिन्न संघ संस्थामा सक्रिय बाग्लुङका विपिन गुरुंग बलियो प्रतिस्पर्धिको रुपमा रहेका छन ।
एन आर एन कोरियाका अर्का अध्यक्षका उम्मेदवार बुद्धि गुरुंग हुन । गत बर्षका पनि अध्यक्षका उम्मेदवार उनी सहमतिमा लक्ष्मी गुरुंगलाई पद छोडेका हुन । गत वर्ष आफूले त्याग गरेको कारण यस वर्ष आफू जसरी पनि आउनुपर्ने उनको भनाई छ । कास्की जिल्लाले आधिकारीक समर्थन , सुवन क्षेत्र र व्यक्तिगत सम्पर्कको कारण उनी पनि अहिलेको बलियो प्रतिस्पर्धि हुन ।
गत वर्ष आफूले त्याग गरिसकेको भन्दै आफू पछि हटन नमिल्ने हुदा सबैको साथ रहने उनको विश्वास छ ।
यसैगरी आई सि सि सदस्यमा २ जना लक्ष्मी गुरुंग र ओम जुक्जालीको मात्र उम्मेदवारी परेकोले निर्विरोध हुने देखिएको छ ।
यता बरिष्ठ उपाध्यक्षमा पहिलेका महासचिव दिपक पुन र अहिलेका उपाध्यक्ष अमृत राई लडदैंछन ।
पुनलाई बाग्लुङ समाज , मगर पुन समाज ,प्रवासी एकता मञ्चको समर्थनदेखिएको छ भने गृह क्षेत्र पश्चिममा उनको विशेष पकड पनि छ । यस्तै अर्का उम्मेदवार अमृत राईलाई राई , पूर्वाञ्चल र जनसम्पर्क समितिको प्यानलले सहयोग गर्ने आश छ तर उनी जनसम्पर्क समितिको भने होईनन ।
यसैगरी ३ जनाको उपाध्यक्षको लागि ६ जना प्रतिस्पर्धिहरु रहेका छन । जसमा सोमबहादुर तामांग, संजीव राई , यदु लामिछाने, अम्बिका डिसी पार्क , ईश्वर बहदुर रोकाया र सुरेश खत्री रहेका छन ।
त्यस्तै महासचिवको लागि एन आर एन का पूर्व प्रवक्ता डा. विमल सुवेदी र धर्मराज जोशी विच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । डा.सुवेदीलाई कास्की परिवारको आधिकारीक समर्थन छ भने पश्चिम क्षेत्रमा उनको पकड देखिन्छ साथै प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको समेत उनलाई साथ हुने देखिन्छ । उनी नेपाली विधार्थी समाज (सोनसिक)कोरियाका पूर्व अध्यक्ष हुन ।
यस्तै अर्का प्रत्यासी धर्मराज जोशी पनि कडा प्रतिस्पर्धी हुन । सुदुर पश्चिम समाजका पूर्व अध्यक्ष जोशी सामाजिक रुपमा सक्रिय छन । उनलाई जनसम्पर्क समितिको प्यानलको साथ हुने आश छ । तर उनी आफू भने जनसम्पर्क समितिकोे होईनन ।
यस्तै सचिव पदमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । २ सचिव पदको लागि मनोज गौतम, राजकुमार स्यांगताङ ,डा. किशोर कोईराला, रोशन भट्टराई ४ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन ।
यसैगरी कोषाध्यक्ष पदमा चन्द्र राणा, राजेन्द्र दुलाल , कुसांङ शेर्पा र संगिता कुवँर ले उम्मेदवारी दिएका छन ।
सहकोषाध्यक्षमा शन्तोष खडकाले एक मात्र उम्मेदवारी दिएकाले उनी निर्विरोध हुनेछन । युवा संयोजक एक पदको लागि अरुण श्रेष्ठ(ईपिएस छिन्गु), अभिषेक सापकोटा, टिका थेजिन लिम्बु गरी ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
अर्को पद महिला संयोजकमा जेजुदो बस्ने शुभद्रा पालुंवाको एक मात्र उम्मेदवारी परेकोले उनी निर्विरोध हुने छिन ।
यसैगरी ६ जना सदस्यहरुको उम्मेदवारी परेकोमा उनीहरु पनि निर्विरोध हुने देखिएको छ
सदस्यका प्रत्यासीहरु , उमेश पोख्रेल ,ओम बहादुर कार्की ,सुवास चन्द्र चौधरी ,अवधेश कुमार चौरसिया ,बिश्वमणी दाहाल ,दिनेश चौँलागाई रहेका छन ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय शुक्रबार बेलुका १० बजे राती सम्म रहेको र केही सामान्य पदमा १,२ उम्मेदवारले फिर्ता लिएपनि मुख्य पदहरुमा भने फिर्ता लिने सम्भावना कम रहेको श्रोतको दावी छ ।h
निर्वाचन समिती द्वारा सार्वजानिक उम्मेद्वारहरूको नामावली यस्तो छ :
१)लक्ष्मी गुरूंग –
२)ओम नारायण जुग्जाली
यज्ञराज सुवेदी –
सोम बहादुर तामांग
सन्जिव कुमार राई
अम्बिका डिसी पार्क
ईश्वर बहादुर रोकाया
डा.किशोर कोईराला –
रोशन भट्टराई -सचिव
टिका थेजिन लिम्बु
महिला संयोजक ‘
ओम बहादुर कार्की
सुवास चन्द्र चौधरी
अवधेश कुमार चौरसिया
स्थान :उद्घाटन शनिबार बिहान9बजे,याक्सु छङ्सुन्योन हेग्वान,याक्सु स्टेसन5नम्बर गेट,,, मतदान गर्ने स्थान,जोगेसा हल,आईतबार बिहान 8:30 बजे देखि वेलुकी6बजे सम्म!!!
गायिका आश्रा कुँवर सम्मानित
कोरियाको जेजुमा आनन्द कार्की एकल साँझ, कार्यक्रममा स्टार रेमिटको सेवा पनि
durlab pardeshilife ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १७:२२ 15th February 2019
स्टार रेमिटको अफर : अगस्त १० सम्म पैसा पठाउनेलाई साडी उपहार
admin २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १९:२० 4th September 2019